Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-March 14, 2020, noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena oluphakathi kwezinsuku ezingu-45 ukusuka namuhla, kuhlanganisiwe kunqubomgomo futhi kungakhanselwa ngaphambi kokungena. Izivakashi ezikhanselayo zizoba nezindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali futhi ababungazi bangakhansela ngaphandle kwenkokhiso noma ukuphazamiseka kwesimo sabo Sombungazi ovelele. Kuphakathi kokuthi i-Airbnb izobuyisa imali, noma ikhiphe isikweletu sohambo esihlanganisa wonke amanani esevisi okukhansela okuvikelwe. Ukuze ukhansele ngaphansi kwenqubomgomo, kuzodingeka ufakazele amaqiniso kanye/noma unikeze ngamadokhumeti asekelayo esimo sakho esingalindelekile.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-March 14, 2020, noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena oluphakathi kwezinsuku ezingu-45 ukusuka namuhla, kungakhanselwa ngaphambi kokungena. Lokhu kusho ukuthi izivakashi ezikhansela ngaphansi kwenqubomgomo zizobuyiselwa imali ephelele noma isikweletu sohambo senani ezilikhokhile (lapho kutholakala khona isikweletu sohambo), ababungazi bangakhansela ngaphansi kwenqubomgomo ngaphandle kwenkokhiso noma ukuphazamiseka kwesimo sabo Sombungazi ovelele, futhi kuphakathi kokuthi i-Airbnb izobuyisela imali, noma ikhiphe isikweletu sohambo ngenani elihlanganisa wonke amanani esevisi.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-March 14, 2020, noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena oluphakathi kwezinsuku ezingu-45 ukusuka namuhla, okwamanje akuhlanganisiwe ezimweni ezingalindelekile ezihlobene ne-COVID-19. Inqubomgomo yokukhansela yombungazi izosebenza njengokujwayelekile.
Uma izinhlelo zami zokuhamba zishintsha ngenxa ye-COVID-19, yini engingakhetha kuyo uma ngikhansela?
Ukuze uthole ukuthi yini ongayikhetha ekukhanseleni nokubuyiselwa imali kwakho kwamanje, iya kokuthi khansela ukubhuka kwakho bese ukhetha o…